Abahlala emgwaqeni bakhokhisa imali engama-R50 ukuthola isikhala kulayini we-UIF | Scrolla Izindaba
Abahlala emgwaqeni bakhokhisa imali engama-R50 ukuthola isikhala kulayini we-UIF
Inqwaba yabahlala emgwaqeni yase-Nelson Mandela Bay basebenzisa ulayini omude eMnyangweni Wezabasebenzi ukuze bazuze ngokwabo.
Abantu baseNingizimu Afrika abangaphezu kwezigidi ezintathu balahlekelwe yimisebenzi selokhu kwaqubuka i-Covid-19 kanti amahhovisi oMnyango Wezabasebenzi agcwala mihla namalanga ngabantu abafuna umshwalense wabo wokungasebenzi. Kepha ngenxa yezinyathelo zokuqapha i-Covid-19 uMnyango ungasebenzela kuphela abantu abangama-200 ngosuku.
Abahlala emgwaqeni eduze noMnyango Wezabasebenzi e-Port Elizabeth e-Govan Mbeki Avenue, imvamisa bazungeze izitolo eziseduze, bachithe usuku kulayini, bese bethengisa indawo yabo ngemali engama-R50 kubafakizicelo.
UNkosinathi Ngalo, oneminyaka engama-29, waselokishini lase-Govan Mbeki uthe: “Kumele siphithizelele imindeni yethu. Kusukela kuqhamuka i-Covid asikwazanga ukuhamba ngokukhululeka futhi sicele imisebenzi. Sibe sesinquma ukuthi sizolala ngaphandle kwaleli hhovisi sithengisele abantu indawo ngemali engama-R50.
“Abantu abafuni ukuma isikhathi eside kulayini kodwa siyabenzela lokho. Ngeviki ngenza imali engama-R250 futhi lokho kungisiza ukuthi ngondle umama wami ongasebenzi nezingane zakithi ezimbili.”
Umngani wakhe u-Aphelele Simon, oneminyaka engama-25, uthe: “Ngayeka isikole ngifunda ibanga le-11 ngoba ekhaya akekho umuntu obeka isinkwa etafuleni. Singaphezu kwama-50 (ohobo) futhi abantu abaningi basebenzisa izinsiza zethu. ”
UZoleka Mabija, oneminyaka engama-33, wase-Motherwell uthe bangabasindisi bempilo.
“Nginengane enezinsuku eziyi-18. Ngifike lapha ngehora lesithathu entathakusa ngoba ngesonto eledlule ngijikiswe ngo-8: 30 ekuseni ngoba bekugcwele. Kodwa namuhla ngingowesibili ngoba ngisithengile isikhala. ”
ULinda Peter, oneminyaka engama-37, wase-Wells Estate uthe, “Ngikhokhe imali eyi-R100 amahlandla amane ukuthi ngikhokhele uhambo ngalunye. Kodwa angikaze ngisizwe. Namhlanje ngithenge isikhala futhi ngingowokuqala kulayini.”